Maxaa doorashada somaliland mar walba dib u dhiga? By maxamed jeex | Gabiley News Online
Maxaa doorashada somaliland mar walba dib u dhiga? By maxamed jeex
October 4, 2019 - Written by maxamed jeex
Waxaan rabaa inaan si kooban uga hadlo xaalada dib u dhigta mar walba dorashada JSL ayaa , waxaanad ugu horeyn is leeyahay anoo ka hadlaaya Doorashada dalkeena.
Horta marka hore waa In la sii xoojiyo midnimada iyo wanaaga umadda Somaliland ayaa muhiim ah, xumaanta iyo wanaaguna shaqo iskuma laha, caydh baan ahay iyo xoolo ayaan leeyahayna wey kala duwan yihiin, dhinaca wanaagsan haddii wax laga eegayana waa la garanayaa, waana wax cad, laakiin haddii danta laga doorbido, oo nin waliba dantiisa khaaska ah ka doorbido, waa dhibaato weyn, wanaaga iyo xumaantuna midabo ayey kala leeyihiin, oo isku mid maaha.
Waa nasiibdaro in marka ay doorashadu soo dhawaato in la gabgableeyo oo yidhaahdo maxaan sameynaa hada anigu waxaan qaladka waxaa iska leh xisbiyada qaranka,golaha guurtida,golaha baarlamaanka & golaha filinta ninna eedaa kama badbadaayo haddii runta isku sheegeyno waa sidaas.
Hadaynu qabsan kariweyno doorasha maxaan ku nahay qaran 29 sagaal & labaatan jirsadey oo mudadaad dheer soo jirey oo aan dhameyn weyno saami qaybsiga & awood qaybsiga ay ka cabanayaan gobolada Awdal,Salal & galbeedka gabiley,anigu waxaan qabaa arintaa ceebteedu waxay saaran tahay cidkasta oo masull ah.
Ilaa maanta waxaan gaadhi laanahay inaan sameysano wax leysla ogyahay oo meel la isla dhigay, oo la isla og yahay waa caadi, ee ha la hagaajo ama halaga heshiiyo si deg deg ah arimaha galbeedka JSL waana inaan la dhayalsan doodaa cad ee gobolada galbeedka JSL ay soo bandhigeen.
,Haddii aqabadahaa culus ee horyaala JSL waxaa dhici doonta in meel aad u fog laga raadin doono qarankaa aan mudada dheer soo dhiseyney een ku bixiney wakhtiga dheer somalidu waxay tidhaahdaa ninkaan waxa soo socda aan garan waxa joogana magarto waa in xal laga gaadha saami-qaybsiga& awood qaybsiga.
Laakiin Ninka dantiisa khaaska ah eegaya, ee leh inaan Mushaharka iska qaato ayaan anigu doonayaa waa nin aan u daneyneyn qarankan JSL,
Inaguma cusubo nin yidhi danteyda ayaa iigu jirta iney sidaas ahaato arintu lkn waa wax ina soo maray, oo inaguma cusba, ninka danta umadda aan eegayn ee leh sidan ayey iigu badisaa wey badanyihiin.
Waxaa soo kale waa la arki jiray waxaase ceeb inagu ah inaan dhameysan weyno cabashada dhaxdeena taal waana sida saxda ah, balse haddii la waayo cidda eeda leh, waxaa inaga faa,iidaysan doona dadka neceb qarankani inuu taabo galo oo uu dowlad la aqoonsanyahay noqdo,cidii wada danta umadda, taariikhda ayaa qoridoonta.
dadka kala qaybinta wadaa waa kuwa masuuliyiinta ah ee aaminsan iney dalkan u soo dagaalameen haddii aaney iyagu tanaasulka keenin cida cabaneysaa ma keeneyso tanaasul sida ay aniga ila tahay. , haddii se la yidhaahdo maxaa xal ah oo raali laga wada yahayna, waa arin wanaagsan, oo meesha ku jira,haddii se la yidhaahdo maxaa iga galey & ma’anuu dalku kaligey iga dumayaa waa mid aaney shacabku reer somaliland mahadindoonin.